ရဲယိုသီးနဲ့ရဲယိုပင်ဟာ ဘယ်လိုအစွမ်းသတ္တိတွေ ရှိပါသလဲ? – Blue Sea
blueseaskt | August 16, 2019 | Health | No Comments
ရဲယို အစွမ်း အံမခန်း
အရွက်၊ အခေါက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အမြစ် အားလုံး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ မြန်မာ့ရဲယိုပင်အကြောင်းကို ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေးလောကသား တော်တော်များများလည်း သိပြီးသား ဖြစ်လောက်မှာပါ။ အရင့်အရင်တုန်းကတည်းက မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အိမ်ခြံဝန်းတွေမှာ ရဲယိုပင်တစ်ပင်တလေတော့ တွေ့နေကြ။ လူကြီးမိဘတွေက ရဲယိုသီးမီးဖုတ်၊ ရဲယိုရွက်ပြုတ်တွေကို ငပိရည်နဲ့တို့စရာအဖြစ် စားသုံးတာကို တွေ့ဖူးသလို၊ အိမ်မှာ ငါးဖယ်ခြစ်လေးကို ရဲယိုရွက်လေးတွေနဲ့ထုပ်ပြီး ဆီပြန်ဟင်း ချက်စားတာမျိုး၊ ရဲယိုရွက်နဲ့ ငါးခူစဉ်းကောလေးနဲ့ နံနံပင်လေးအုပ်၊ အိုးကပ်ချက်စားတာမျိုးကိုလည်း ကျွန်မတို့တတွေ စားဖူးနေကြ။ သို့သော် တကယ်တမ်း ကျန်းမာရေးအတွက် သေသေချာချာ နေ့စဉ်စားသုံးကြည့်ဖို့ကိုတော့၊ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မကူးမိခဲ့ပါဘူး။
တစ်နေ့ကတုန်းကပေါ့။ ရဲယိုပင်စိုက်ပျိုးတဲ့ တောင်သူတစ်ယောက်ကို အင်တာဗျူးဖို့ စီစဉ်ရင်း၊ သူ့ကို အင်တာမဗျူးခင်မှာ သူထုတ်လုပ်နေတဲ့ ရဲယိုထုတ်ကုန်တွေ အကြောင်းကို အရင်ဆုံး လေ့လာဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရဲယိုပင်တစ်ပင်လုံးရဲ့ အစွမ်းတွေကို တစေ့တစောင်း တီးမိ၊ ခေါက်မိခဲ့ပါတော့တယ်။
ရဲယိုပင်ကို နိုနီ (Noni) လို့လည်း ခေါ်ကြပြီး၊ ရုက္ခဗေဒအမည် Morinda anhgustifolia Roxb လို့ ခေါ်တွင်ပါတယ်။ ရဲယိုပင်ကနေထွက်တဲ့ ရဲယိုထုတ်ကုန် (စားသောက်ကုန်) တွေကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကာဗိုဟိုက်ထရိတ်၊ ကစီဓာတ်၊ သကြားဓာတ်၊ အသားဓာတ် (ပရိုတင်း) စတာတွေကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
ရဲယိုရွက် – ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကျန်းမာစေတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ပိုထုတ်ဖို့ အားပေးပြီးတော့၊ မကောင်းတဲ့ ဆဲလ်တွေကို လျော့နည်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရဲယိုရွက်ကို ဟင်းအဖြစ်ပဲ ချက်စား၊ တို့စားလို့ပဲ ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒဏ်ရာပေါ်မှာ အုံပေးတာမျိုး၊ အရွက်ကို ထောင်းထုပြီး ဆေးအဖြစ် သုံးပေးလို့ ရပါတယ်။ အရွက်ကို အခြောက်ခံပြီး အမှုန့်အဖြစ် သောက်သုံးပေးရင်လည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေကို တိုးမြှင့်စေပါသေးတယ်နော်။ (တချို့ခံတွင်းတွေအတွက် ရဲယိုရွက်စားရင် အခါးဓာတ်နဲ့ အနည်း ငယ်ယားယံတာမျိုးကို ကြုံရင်လည်း၊ ရဲယိုရွက်တွေကို ဆားနဲ့နယ်ပြီး၊ ရေဆေးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။)
ရဲယိုဖျော်ရည် – ဇီးသီး၊ သရက်သီး၊ နာနတ်သီးအမှည့်တွေကို ဖျော်ရည်အဖြစ် သောက်သုံးပေးသလိုပဲ၊ ရဲယိုသီးအမှည့်ကိုလည်း သကြားလေးနဲ့ ဖျော်ရည်အဖြစ်၊ သောက်သုံးပေးလို့ ရပါတယ်။ ရဲယိုသီးဖျော်ရည်ရဲ့အစွမ်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဓိကလိုအပ်တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်ကို အားဖြည့်တာကြောင့်၊ အမောအပန်းခံနိုင်ကာ အားအင်ပြည့်ဖြိုးစေပါတယ်တဲ့။
ရဲယိုသီး – ရဲယိုသီး မမှည့်တမှည့်လေးကို မီးဖုတ်ပါ။ ဆားလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်လို့ သွားတိုက်ဆေးအဖြစ် တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် သွားနဲ့သွားဖုံးတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ရဲယိုသီးကို ပျား ရည် (သို့မဟုတ်) ထန်းလျက်နဲ့ခေါက်စားပါက ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
၁၉၉၃-ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားမြို့မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေ ရဲယိုသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ဓာတ်တွေဟာ သွေးတိုး ရောဂါနဲ့ နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကို လျော့ကျစေတာ၊ မှိုရောဂါနဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်တာ၊ အဖုအကြိတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတာကို လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေမှာ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရဲယိုသီးယို – ရဲယိုသီးအမှည့်တွေကို ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပါ။ နောက်ထပ် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ ထန်းလျက်၊ ဆား နည်းနည်းစီ ထည့်ပါ။ အပူပေး အခြောက်ခံပါ။ ပျားရည် (သို့မဟုတ်) ထန်းလျက် နဲ့ တို့စားလို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ ရဲယိုသီးအမှည့်တွေကို ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပြီး၊ ထန်းလျက်နဲ့ (မိမိနှစ်သက်ရာ အချိုဓာတ် အတိုင်း) တစ်ခါတည်းရောနှောပါ။ အပူပေးလို့ ယိုထိုးပြီး၊ သွားရေစာ (အိမ်သုံးဆေးဝါးဓာတ်စာ) အဖြစ်လည်း စားသုံးလို့ ရပါပြီ။ ရဲယိုသီးယိုကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးတာ၊ စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းစေတဲ့ အကျိုးတွေကို ရစေမှာပါတဲ့ရှင့်။
အဲ့ဒီတော့ – အနောက်တိုင်းက တင်သွင်းလာတဲ့ဆေးဝါးတွေကို အားကိုးနေမယ့်အစား၊ ကိုယ့်ခြံထဲက ထွက်ရှိတဲ့ ရဲယိုတစ်ပင်လုံးကို အရိုးရော၊ အရွက်ပါမကျန် နည်းမျိုးစုံ ပြုလုပ်စားသောက်လိုက်မယ် ဆိုရင် (ရဲယိုဓာတ်စာရည်၊ ရဲယိုပေါင်းရည်၊ ရဲယိုသီးယို စတဲ့စား သောက်ကုန်တွေကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်) ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရာ ရောက်စေမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ စေတနာရှေ့ထား တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
အရှကျ၊ အခေါကျ၊ အပှငျ့၊ အသီး၊ အမွဈ အားလုံး ဆေးဖကျဝငျတဲ့ မွနျမာ့ရဲယိုပငျအကွောငျးကို ကြှနျမတို့ စိုကျပြိုးရေးလောကသား တျောတျောမြားမြားလညျး သိပွီးသား ဖွဈလောကျမှာပါ။ အရငျ့အရငျတုနျးကတညျးက မွနျမာလူမြိုးတို့ရဲ့ အိမျခွံဝနျးတှမှော ရဲယိုပငျတဈပငျတလတေော့ တှနေ့ကွေ။ လူကွီးမိဘတှကေ ရဲယိုသီးမီးဖုတျ၊ ရဲယိုရှကျပွုတျတှကေို ငပိရညျနဲ့တို့စရာအဖွဈ စားသုံးတာကို တှဖေူ့းသလို၊ အိမျမှာ ငါးဖယျခွဈလေးကို ရဲယိုရှကျလေးတှနေဲ့ထုပျပွီး ဆီပွနျဟငျး ခကျြစားတာမြိုး၊ ရဲယိုရှကျနဲ့ ငါးခူစဉျးကောလေးနဲ့ နံနံပငျလေးအုပျ၊ အိုးကပျခကျြစားတာမြိုးကိုလညျး ကြှနျမတို့တတှေ စားဖူးနကွေ။ သို့သျော တကယျတမျး ကနျြးမာရေးအတှကျ သသေခြောခြာ နစေ့ဉျစားသုံးကွညျ့ဖို့ကိုတော့၊ ကြှနျမကိုယျတိုငျလညျး စိတျမကူးမိခဲ့ပါဘူး။
တဈနကေ့တုနျးကပေါ့။ ရဲယိုပငျစိုကျပြိုးတဲ့ တောငျသူတဈယောကျကို အငျတာဗြူးဖို့ စီစဉျရငျး၊ သူ့ကို အငျတာမဗြူးခငျမှာ သူထုတျလုပျနတေဲ့ ရဲယိုထုတျကုနျတှေ အကွောငျးကို အရငျဆုံး လလေ့ာဖွဈသှားခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီနောကျတော့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ရဲယိုပငျတဈပငျလုံးရဲ့ အစှမျးတှကေို တစတေ့စောငျး တီးမိ၊ ခေါကျမိခဲ့ပါတော့တယျ။
ရဲယိုပငျကို နိုနီ (Noni) လို့လညျး ချေါကွပွီး၊ ရုက်ခဗဒေအမညျ Morinda anhgustifolia Roxb လို့ ချေါတှငျပါတယျ။ ရဲယိုပငျကနထှေကျတဲ့ ရဲယိုထုတျကုနျ (စားသောကျကုနျ) တှကေို စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ကာဗိုဟိုကျထရိတျ၊ ကစီဓာတျ၊ သကွားဓာတျ၊ အသားဓာတျ (ပရိုတငျး) စတာတှကေို ရရှိနိုငျတယျလို့ ဆေးပညာရှငျတှကေ ဆိုထားပါတယျ။
ရဲယိုရှကျ – ခန်ဓာကိုယျထဲက ကနျြးမာစတေဲ့ ဆဲလျတှကေို ပိုထုတျဖို့ အားပေးပွီးတော့၊ မကောငျးတဲ့ ဆဲလျတှကေို လြော့နညျးအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ရဲယိုရှကျကို ဟငျးအဖွဈပဲ ခကျြစား၊ တို့စားလို့ပဲ ရတာမဟုတျပါဘူး။ ဒဏျရာပျေါမှာ အုံပေးတာမြိုး၊ အရှကျကို ထောငျးထုပွီး ဆေးအဖွဈ သုံးပေးလို့ ရပါတယျ။ အရှကျကို အခွောကျခံပွီး အမှုနျ့အဖွဈ သောကျသုံးပေးရငျလညျး ကိုယျခံစှမျးအားတှကေို တိုးမွှငျ့စပေါသေးတယျနျော။ (တခြို့ခံတှငျးတှအေတှကျ ရဲယိုရှကျစားရငျ အခါးဓာတျနဲ့ အနညျး ငယျယားယံတာမြိုးကို ကွုံရငျလညျး၊ ရဲယိုရှကျတှကေို ဆားနဲ့နယျပွီး၊ ရဆေေးပေးလိုကျရငျ အဆငျပွသှေားမှာပါ။)
ရဲယိုဖြျောရညျ – ဇီးသီး၊ သရကျသီး၊ နာနတျသီးအမှညျ့တှကေို ဖြျောရညျအဖွဈ သောကျသုံးပေးသလိုပဲ၊ ရဲယိုသီးအမှညျ့ကိုလညျး သကွားလေးနဲ့ ဖြျောရညျအဖွဈ၊ သောကျသုံးပေးလို့ ရပါတယျ။ ရဲယိုသီးဖြျောရညျရဲ့အစှမျးကတော့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဓိကလိုအပျတဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျကို အားဖွညျ့တာကွောငျ့၊ အမောအပနျးခံနိုငျကာ အားအငျပွညျ့ဖွိုးစပေါတယျတဲ့။
ရဲယိုသီး – ရဲယိုသီး မမှညျ့တမှညျ့လေးကို မီးဖုတျပါ။ ဆားလေးနညျးနညျးလောကျထညျ့လို့ သှားတိုကျဆေးအဖွဈ တိုကျပေးမယျဆိုရငျ သှားနဲ့သှားဖုံးတှကေို သနျစှမျးစပေါတယျ။ ရဲယိုသီးကို ပြား ရညျ (သို့မဟုတျ) ထနျးလကျြနဲ့ခေါကျစားပါက ခြောငျးဆိုး၊ ပနျးနာရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
၁၉၉၃-ခုနှဈက ဂပြနျနိုငျငံ ယိုကိုဟားမားမွို့မှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျတဈခုကနေ ရဲယိုသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ ဆေးဖကျဝငျဓာတျတှဟော သှေးတိုး ရောဂါနဲ့ နာကငျြရောငျရမျးမှုတှကေို လြော့ကစြတော၊ မှိုရောဂါနဲ့ ရောဂါပိုးမှားတှကေို သစေနေိုငျတာ၊ အဖုအကွိတျတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစတောကို လလေ့ာစမျးသပျမှုတှမှော တှရှေိ့ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ရဲယိုသီးယို – ရဲယိုသီးအမှညျ့တှကေို ကွိတျစကျနဲ့ကွိတျပါ။ နောကျထပျ ပါဝငျပစ်စညျးတှအေနနေဲ့ ထနျးလကျြ၊ ဆား နညျးနညျးစီ ထညျ့ပါ။ အပူပေး အခွောကျခံပါ။ ပြားရညျ (သို့မဟုတျ) ထနျးလကျြ နဲ့ တို့စားလို့ရပါပွီ။ နောကျတဈနညျးကတော့ ရဲယိုသီးအမှညျ့တှကေို ကွိတျစကျနဲ့ကွိတျပွီး၊ ထနျးလကျြနဲ့ (မိမိနှဈသကျရာ အခြိုဓာတျ အတိုငျး) တဈခါတညျးရောနှောပါ။ အပူပေးလို့ ယိုထိုးပွီး၊ သှားရစော (အိမျသုံးဆေးဝါးဓာတျစာ) အဖွဈလညျး စားသုံးလို့ ရပါပွီ။ ရဲယိုသီးယိုကို စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ အရှယျမတိုငျမီ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို တားဆီးပေးတာ၊ စိတျနှလုံးရှငျလနျးစတေဲ့ အကြိုးတှကေို ရစမှောပါတဲ့ရှငျ့။
အဲ့ဒီတော့ – အနောကျတိုငျးက တငျသှငျးလာတဲ့ဆေးဝါးတှကေို အားကိုးနမေယျ့အစား၊ ကိုယျ့ခွံထဲက ထှကျရှိတဲ့ ရဲယိုတဈပငျလုံးကို အရိုးရော၊ အရှကျပါမကနျြ နညျးမြိုးစုံ ပွုလုပျစားသောကျလိုကျမယျ ဆိုရငျ (ရဲယိုဓာတျစာရညျ၊ ရဲယိုပေါငျးရညျ၊ ရဲယိုသီးယို စတဲ့စား သောကျကုနျတှကေို စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ) ဈေးနှုနျးသကျသကျသာသာနဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျရာ ရောကျစမှော ဖွဈတဲ့အကွောငျး၊ စတေနာရှထေ့ား တိုကျတှနျးနှိုးဆျောလိုကျရပါတယျ။
Leaves, bark, Flower Fruit, The root isamedicinal species of morinda Burma, our agriculture around the world is pretty much known. According to the country, since the past our yard still seeaspecies of morinda tree footage. Adult parents species of morinda baked, The species of morinda leaves boiled asaSpanish wine and food, At home, figured taking it likeabundle of small species of morinda leaves oily curry and eat there, What species of morinda leaves and catfish, the kids and others Jars and any they had ever eaten. But, in fact, but be sure to see the daily health I did not mind.
In Day. The cultivated species of morinda arrange an interview withafarmer, Before him ဗြူး manufacturing becomes learn about species of morinda product first. Just priceless power of all the species of morinda tree can glimpse it, Fold again.
The species of morinda Also called Nu (Noni) The botanical name called Morinda anhgustifolia Roxb. The species of morinda sunrise species of morinda If the product (food) consumption and harvesting virus Heights Carbohydrate, Sugar, Reactive protein (meat), etc. can receive medical practitioners said.
Species of morinda leaf out of the body, are encouraged to produce more healthy cells Helps reduce the bad cells. Asaspecies of morinda curry leaves, Life is not easy. On the injury, such as hive BLOWING leaves ဆေးအဖွဈ me. Dried leaves consumed asapowder-priced but still can continue to enhance the immune profile. (Some species of morinda leaves bitter supplement for appetite and itching never walkedalittle salt, species of morinda leaves, wash them to be ok.)
Species of morinda-plum juice, mango, Ripe pineapple juice drink as it seemed, Species of morinda ripe fruit andalittle juice, sugar To drink. The power of this new species of morinda juice main body to fill out the necessary hormonal, Full-fat diet.
Species of morinda species of morinda ripe fruit is not ripe just baked. Addalittle salt if ဆေးအဖွဈ and gums stronger. The species of morinda honey (or fold) with palm andacough, Asthma disease.
In 1993, Yokohama City University in Japan, including the species of morindaamedicinal substance with high blood pressure to reduce pain and inflammation from the disease has been caused, မှိုရောဂါ and can kill microbes, The lump tests recovered sufficiently enough study has found.
Species of morinda species of morinda ripe fruit grinding machine grinding. Additional materials include palm, Addalittle salt. Heating drying. (Or honey) and palm andafew things to note. Alternatively, the ripe fruit ofaspecies of morinda grinding machine, secretly Palm and mix (sugar) of your choice once. Knitted drop to heat, (Home) can now also use diet drugs. If you eataspecies of morinda premature aging and prevent money Gladden the heart ofagood opening.
The bye-West rather than to rely on imported drugs, Just ခွံထဲက launched, bones and evenaspecies of morinda I’ll leave forms that eat the leaves (species of morinda syrup, all species of morinda syrup diet, eatingaspecies of morinda consumer) would bring the price of cheap health care,aReady to encourage me.
Love sharp Nang (ABM)